यी महिनामा जन्मिने युवतीहरू हुन्छन् धनी र सर्वगुणी ! जानिराख्नुहोस् – Nepal Trending
यी महिनामा जन्मिने युवतीहरू हुन्छन् धनी र सर्वगुणी ! जानिराख्नुहोस्
बैशाख महिनामा जन्मिने महिला: यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतया: सुन्दर आँखा भएका हुन्छन् । उनीहरुको स्वभाव सरल र सहज हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । यिनीहरूबीचको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यी महिलाहरू कम खर्च गर्ने तर धेरै क्रोध भएका हुन्छन् । उनीहरूले जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ ।
जेठ : जेष्ठ महिनामा जन्म लिएका महिलाहरू उत्तम बुद्धि भएका हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सुख र धन सहजै प्राप्त गर्छन । यी महिलाहरूका लागि जीवनमा आइपर्ने कुनैपनि कार्यहरूमा समस्या हुँदैन् । यी महिलाहरू तिर्थधर्म गर्नेमा अगाडी हुन्छन् । यिनीहरुको जोडी सामान्य रहन्छ । त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन् ।
असार : असारमा जन्मिएका महिलाहरू मीठो बोली बोल्छन् । उनीहरूको आवाजमा मधुरता हुन्छ । उनीहरूका श्रीमानको स्वभाव पनि राम्रो हुन्छ । कडा मेहनत र संघर्ष गर्दा समेत उनीहरूले सोचे जस्तो सुख र धन प्राप्त नहुन सक्छ । यी स्त्री दुब्ला पातला र झगडालु समेत हुन्छन् ।
साउन : साउन महिनालाई पवित्र र शुभ महिना मानिन्छ । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् । यस्ता स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा समान रुपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ । यी महिलाहरूले सन्तानबाट सुख प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अधिकांस समय कुनै न कुनै बिमारीबाट घेरिरहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरू श्रीमान तथा प्रेमीबाट अधिक प्रेमको आशा राख्ने गर्दछन् ।
भदौ : भदौ महिनामा जन्म लिएका महिलाहरू प्राय मिठो बोली र सरल स्वभावका हुन्छन । उनीहरूलाई श्रीमानबाट पनि अत्यन्तै सुख र प्रेम मिल्छ । घरपरिवार सासु ससुराबाट माया र सम्मान प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अलि जिद्दी स्वभावका पनि हुन्छन् । उनीहरूको जिद्दीका कारण धेरैपटक समस्याहरू आइपर्दछन ।
असोज : असोज महिनामा जन्मिएका महिलाहरूको स्वभाव चञ्चल हुन्छ । उनीहरू कसैसँग कुरा गर्दा पनि सर्तकता अपनाउँछन् । यिनीहरुलाई प्रसस्त धन प्राप्त गर्नुका साथै श्रीमानबाट पनि सुख मिल्ने गर्छ । यिनीहरुलाई सन्तानबाट चिन्ता हुने देखिन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
कार्तिक : कात्तिकमा जन्म लिने महिला धनवान र बुद्धिमानी हुन्छन् । उनीहरू धेरै कलामा निपुण हुन्छन् । यिनीहरु मिठो बोल्छन् । सामान्यतया यी महिलाहरूले आफ्ना श्रीमानलाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छन् । घरपरिवार, सासु-ससुरासँग पनि झगडा गर्ने तथा झगडालु हुन्छन् । उनीहरूमा रुघाखोकी सम्बन्धी बिमारी बढी देखिन्छ ।
मङ्सिर : मङ्सिर महिनामा जन्म लिने महिलाहरू नरम स्वभावका हुन्छन् । यी महिलाहरू बिस्तारै कुरा गर्छन् । उनीहरूलाई झुटो कुरा गरेको मन पर्दैन । यिनीहरुको मन धार्मिक काममा बढी जान्छ । धन सञ्चित गर्ने र खर्च पनि अधिक गर्ने बानीले यिनीहरुको आर्थिक अवस्था सामान्य रहने गर्छ । उनीहरूलाई पेटसम्बन्धी समस्या बढी हुने सम्भावना रहन्छ ।
पुष : पुष महिनामा जन्मेका महिलाहरूमा सामान्यतया: अत्यन्तै क्रोध भरिएको हुन्छ । यी महिलाहरू आफ्नै कामबाट भाग्य निर्माण गर्ने खुबी राख्छन् । यी महिला कुनै एक क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छन् । सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् । सबैसँग मिलजुल गर्ने स्वभावका कारण समाजमा मान सम्मान पाउँछन् । पुष महिनामा जन्मिने महिलाहरुमा टाउको दुख्ने, वायु र वाथ रोगको समस्या बढी देखिन्छ ।
माघ: माघ महिनामा जन्मिएका महिलाहरू सुन्दर अनुहारका हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् । सरल र सहज स्वभावका भएपनि अलि जिद्दी स्वभाव का हुन्छन । यिनीहरू अरुलाई कुरा गर्दा पुरा कुरा गर्न नदिने स्वभावका हुन्छन् । यी महिलाहरू कमजोरीका कारण विभिन्न रोगको शिकार हुने पनि देखिन्छ ।
फागुन : फागुन महिनामा जन्म लिने महिला धेरै दयावान हुन्छन् । उनीहरू कसैको पनि दु:ख देख्न सक्तैनन् । उनीहरूको स्वभाव र विचार बढी धार्मिक हुन्छन् । यी महिलाहरू पढाइ लेखाइमा अत्यधिक तेज हुन्छन् । दयालु भएकै कारण धन धेरै आर्जन गर्न नसक्ने हुन्छन । स्त्री दुबली पातली हुन्छन् तर अग्ला । सामान्यतया यस्ता स्त्री कालो वर्णका हुन्छन । यस्ता महिला अरुका कुरा काट्ने पनि हुन् सक्छन् ।
चैत: चैत महिनामा जन्मिएका महिला चलाख र चतुर हुन्छन् । यस्ता महिला सुन्दर हुन्छन् । यिनीहरु सुन्दर हुनुका साथै चञ्चल स्वभावका कारण अरुलाई छिटो आकर्षण गर्नेगर्छन् । धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । उनीहरूमा कहिलेकाहिँ क्रोध हावी हुनाले समस्या पनि निम्त्याउने गर्दछ ।